Dagaal ka dhacay Gobolka Hiiraan & faah faahin laga helayo | SMC
Home WARARKA MAANTA Dagaal ka dhacay Gobolka Hiiraan & faah faahin laga helayo
Dagaalka oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxaa uu ka dhacay degaanka Halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaana uu u dhaxeeyay Ciidamada Itoobiya ee halkaasi ku sugan & Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid sida la sheegay kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Saldhiga Ciidamada Itoobiya ku leeyihiin degaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday muddo saacado ah.
Dadka degaanka ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, balse aan la ogaan Karin qasaaraah ka dhashay dagaalka maadaama Ciidamada Itoobiya ogoleyn in loo dhawaado Xeryahooda.
Wararka kale ayaa waxaa ay sheegayaan in labad dhinac ay s-dhaafsadeen madaafiic, taas oo ku dhacday Xaafadaha qaar ee degaanka Halgan, balse aysan geysan wax qasaaro ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degaanka ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalada ay tahay mid degan, isla markaana isku socodka Ganacsiga dadka iyo Gaadiidka ay yihiin kuwo caado ah.
Previous articleXOG: Fahad Yaasiin oo diyaariyay qorshe ka dhan ah dadka horkacaya Kacdoonada Dadweyne
Next articleSAWIRRO:-Dowladda Soomaaliya oo Ciidamo horleh geysay Gobolka Gedo